७ वर्ष दास, फर्कने बेला रित्तो हात
Thu, Jan 28, 2021१५ माघ, २०७७
- रमेश भारती
रामेछापकी पवित्रा मगर (नाम परिवर्तन) रोजगारीका लागि ७ वर्षअघि यूएई गएपछि उनी एक पटक स्वदेश नफर्किई उतै काम गर्दै बसिन् ।
देशमा रोजगारीको अवसर र हातमा राहदानी नभएका कारण पवित्रा नेपाल फर्किन नसकेको बताउँछिन् । यूएई ७ वर्ष बस्दा ५ वटा घरमा काम गरेको र कोरोनाका कारण मात्र घर फर्किन पाएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भेटिएकी पवित्राले बताइन् ।
‘हामी जस्ता असहाय महिलालाई कसले सहारा दिन्छ । जहाँ गए पनि हामी महिला नै हौँ । अरूले जे भन्छन्, त्यही मान्नुपर्छ । विदेशमा ७ वर्ष दास भएर घरघरमा काम गरेँ । अन्त्यमा रित्तो हात स्वदेश फर्किनुपर्‍यो’, उनले भनिन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा यूएई पुगेको २ वर्षदेखि नेपाल फर्किन खोजेको तर आफूसँग राहदानी नभएकाले लुटिँदै भए पनि घरघरमा काम गर्दै बस्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘तपाईं नै भन्नुहोस्, बेरोजगार भएर विदेश जानु पाप हो र ?’, उनको आक्रोश छ ।
यूएईमा रहेको नेपाली दूतवासमा स्वदेश फर्किन धेरै पटक फोन गरेको तर फोन उठाए पनि के समस्या छ भनेर नसोधी फोन राख्ने गरेको मगरको आरोप छ ।
‘नेपाली कामदारको हकहितका लागि सरकारले खोलेको दूतावासले आफ्ना नागरिकका समस्याप्रति बेवास्ता गर्दा कस्तो हुन्छ होला ? त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई तपाईं आफैँ सोध्नुहोस् । दूतावासले गरेको व्यवहार हेर्दा सरकारप्रति घृणा लाग्छ’, उनले भनिन्, ‘सरकारकै कारण म यूएईमा ७ वर्ष श्रममा र शारीरिक दुवै हिसाबले लुटिएर आएकी छु । मलाई अब सरकारले नेपालमा क्षतिपूर्ति कि रोजगारी दिनुपर्छ ।’
७ वर्ष यूएईमा काम गर्दा मानसिक तनाव र शारीरिक यातनाभन्दा अरू केही नपाएको उनको गुनासो छ । ‘कोरोना भाइरसका कारण मात्र यूएईमा घरेलु रोजगारीमा गएका महिला कामदार स्वदेश फर्किन पाए । नत्र कति वर्ष यौनदास बनेर बस्नुपर्ने थियो । नेपाली महिलाहरूलाई यौन प्यासका लागि मात्र भए पनि यूएईमा घरेलु काममा लिन्छन्’, उनी भन्छिन्, ‘सरकारले रोजगारदाता देशबाट पुनः श्रम स्वीकृति वितरण नगर्दा बाध्य भएर शरीर लुटाउँदै बस्नुपर्छ । साथमा राहदानी नभएपछि कतै जाने सकिँदैन । त्यही भएर पसु जस्तो घरभित्रै जे गर्छन्, सहेर बस्नुपर्छ ।’
विदेशबाट फर्किएका कामदारका आफ्नाआफ्ना समस्या छन् । यसरी समस्या लिएर आएका कामदारले कसैले समस्या भन्छन् त केहीले बोल्न चाहँदैनन् ।
मगर जस्तै ओमानबाट कोरोना भाइरसका कारण समस्यामा परेर पाल्पाकी सुभद्रा केसी (नाम परिवर्तन) ५ वर्षपछि स्वदेश फर्किएकी छन् । सुभद्राले ५ वर्ष ओमानमा बस्दा धेरै कष्ट भोगेको बताउँछिन् । कोरोना भाइरसका कारण नेपाल फर्किन पाएकामा धेरै खुसी लागेको उनको भनाइ छ ।
‘नेपालबाट रोजगारीका लागि बहराइन गएकी थिएँ । बहराइनमा २ वर्ष बसेपछि घर मालिकले ओमान पुर्‍यायो । ओमानमा ४ वर्ष बसेपछि कोरोना भाइरसका कारण स्वदेश फर्किएँ’, उनले भनिन्, ‘ओमान र बहराइन बस्दा धेरै शारीरिक तनाव व्योहोर्न बाध्य भएँ । बहराइनबाट उठाएर साहुको सालो पर्नेले ओमानतिर लग्यो । बहराइनबाट ओमानमा लगेर ३ वर्ष सालोले राख्यो ।’
बहराइन भनेर गएको बेचिएर ओमान पुगेर नेपाल फर्किन बाध्य भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले विदेशबाट पुनः श्रम स्वीकृति जारी नगर्दा म जस्ता धेरै महिला बाध्यताले लुटिएर बसेका छन् । सरकारकै कारण म पनि ३ वर्ष ओमानमा शरीर लुटाएर बस्न बाध्य भएँ’, उनले भनिन्, ‘खाडीमा घरेलु रोजगारीका लागि गएका नेपाली महिलासँग साहुको शरीर सम्बन्ध मात्र हुन्छ । साहुहरूको यौन सम्बन्धसँग मात्र मतलब हुन्छ अरू कुराको मतलब हुँदैन ।’
वैदेशिक रोजगारी भन्नु मात्र रहेको, त्यहाँ नारकीय जीवन बिताएर फर्किनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदार स्वदेश फर्किन पाउँदा धेरै खुसी त छन् तर धेरै वर्ष विदेशमा बसेर फर्किंदा परिवार र समाजमा एकीकरण हुने समस्या हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् विदेशबाट फर्किएका महिला ।
सरकारले २०७२ सालयता खाडीका देश र मलेसिया महिला घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । महिला मात्र होइन, ती देशमा घरेलु काममा पुरुष कामदार जान पाएका छैनन् ।
सरकारले मलेसिया र खाडीका देशमा नेपाली महिला घरेलु काम पठाउन प्रतिबन्ध लगाए पनि भारत हुँदै ती देशमा नेपाली महिलालाई तस्करले घरेलु काममा पठाइरहेका छन् । खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनी एजेन्टले देशअनुसार पैसा लिएर मात्र पठाएको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा पर्ने गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका र विदेशमा समस्यामा परेर फर्किएका महिला कामदारले म्यानपावरले ठूलो रकम लिएर पठाएको मासिक २ सयभन्दा धेरै उजुरी विभागमा दिने गरेका छन् ।
९० प्रतिशत नेपाली महिला घरेलु रोजगारीका लागि मध्यपूर्वका, खाडीका देश र मलेसिया जाने गरेका छन् । नेपालबाट कम्पनी र सर्भिस भिसामा लगेर घरेलु काममा लगाउने गरेको र समस्यामा परेर फर्किएका महिला कामदारले बताउँछन् ।
सरकारले गत ३२ जेठदेखि कोरोना भाइरसका कारण विभिन्न देशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको उद्धार गरेर स्वदेश फर्काइरहेको छ । नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थलमा दैनिक विदेशबाट फर्किएका नेपाली नागरिकको भिड लाग्ने गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार ११, २०७७, ११:३७:००
राजनीतिमा युवा कि सचेत युवा ? राजनीतिमा युवा कि सचेत युवा ?9min read
कालीकाेटका पुष्पराजले तरकारी बेचेरै कमाउँछन् महिनामा १ लाख कालीकाेटका पुष्पराजले तरकारी बेचेरै कमाउँछन् महिनामा १ लाख4min read
फेक न्युज आतंकः न्युज हाेइन, भ्युजमा ध्यान फेक न्युज आतंकः न्युज हाेइन, भ्युजमा ध्यान3min read
ज्योति विकास बैंकको १० प्रतिशत बोनस शेयर पारित2min read
किष्ट शिक्षण अस्पतालमा पनि कोरोनाविरुद्धको खोप कार्यक्रम सुरु2min read
दीपकराज गिरीको तर्क- नेपाली चलचित्रको इतिहास पाँच दशक लामो होइन3min read
कक्षा १० को एसइई राष्ट्रिय कि प्रदेशस्तरबाट ?5min read
राजनीतिमा युवा कि सचेत युवा ?9min read
युवराज संग्राैलाले इजलासमै पढेर सुनाए न्यायाधीश सपना मल्ल र महान्यायाधिवक्ता खरेलकाे नाम4min read
विवेक बन्धकी राखेका लम्पट कार्यकर्ता यो देशको प्रगतिका बाधक9min read
‘नेकपा विभाजनमा ओली र प्रचण्ड बराबर दोषी छन्’ 15 min read
कोभिसिल्ड खोप लगाऔँ, तर यो रामबाण होइन 27 min read
फेक न्युज आतंकः न्युज हाेइन, भ्युजमा ध्यान3min read
ब्लगः हजार केन्द्रीय सदस्यकाे माया लागेर आउँछ6min read
ब्लग :संसारै अन्धो छैन नि महाराज !7min read